Darpan Nepal – यी हुन् संसारकै सबैभन्दा महंगा पाँच कीसीनका फल कुन कुन हुन जानीराखौं!
यी हुन् संसारकै सबैभन्दा महंगा पाँच कीसीनका फल कुन कुन हुन जानीराखौं!
May 12, 2018Admin12Health0Like
यी हुन् संसारकै सबैभन्दा महंगा पाँच कीसीनका फल
कुन कुन हुन जानीराखौं!
अजसम्म तपाईले महंगा घर, मोबाइल फोन, कार, कपडा, बाइक, चश्मा, घडी देखि महंगा जनवारका बारेमा सुन्नुभएको होला । तर महंगा फलका बारेमा कमै सुन्नुभएको होला । संसारमा यस्ता ६ फल छन् जो महंगा छन् । यी फल अलग–अलग ठाँउमा पाइन्छ ।
कतिपर्छ दाम ?
१. लास्ट गार्डन अफ हेलिगन पाइनएप्ल– यो प्रजातीको भूइँकटहर संसारमा पाइने सबैभन्दा महंगो फलको सूचीमा छ । यो भइँकटहरको मूल्य ९६ हजार हो । यसको खेती इंग्ल्याण्डमा हुन्छ ।
२. रुबी रोमन अंगुर– यो प्रजातिको अंगुरको आकार निकै ठूलो हुन्छ । यो अंगुरका एक गुच्छाको २ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पर्छ । यो अंगुर जापानमा पाइन्छ । एक पिसको ६० हजार रुपैंया पर्दछ । एक गुच्छामा २० दाना हुने र एक दान २० ग्रामको हुने बताइन्छ ।
३. स्कवायर तरबुजा–तपाईले अहिलेसम्म गोलो आकारको तरबुजा देख्नुभएको होला । तर चौकुना आरको तरबुजा देख्नुभएको छ । छैन होला । यस्तो खालको तरबुजा जापानमा पाइन्छ । एक तरबुजाको मूल्य ५३ हजार रुपैंया पर्दछ । यसको तौल पाँच किलो भन्दा माथि हुन्छ ।
४. युबरी खरबजुा– तपाईले गर्मीको समयमा खरबुजा खानुभएको होला । तर के एक खरबुजाको मूल्य १५ लाख भन्दा बढी तिर्नुभएको छ । सायदै छैन होला । जापानमा युबरी नामको खरबुजाको पाइन्छ । यो ज्यादै मिठो हुन्छ । यो प्रजातिको एक खरबुजाको मूल्य १५ लाख ३३ हजार भन्दा बढी पर्छ ।
५. ताइयो नो तामागो आँप– भारतमा आँपका धेरै प्रजाति पाइन्छ । अल्पान्सो भारतको चर्चित आँप हो । तर यसको मूल्य कहिलै २ लाख पर्दैन । भारतमा पाइने ताइयो नो तामागो प्रजातिको आँपलाई सूर्यको अण्डा भनिन्छ । यो प्रजातिको आँपको एक जोडीलाई २ लाख रुपैयाँ पर्दछ । एजेन्सी
Previous Postयो शहरमा बस्ने सबैलाई ४० लाख दीईन्छ कीन?? Next Postके तपाईलाई थाहॉ छ संसारको सबैभन्दा महंगो सर्प, जसबाट बनाइन्छ यौन क्षमता बढाउने औषधी !